Ny mikrôphônina dia rafitra iray natao hanamafisana ny mikrôhô amin'ny haavony sy amin'ny tendrony maromaro. Izany dia atao amin'ny tanjona tokana - hampitombo ny fampiononana amin'ny fampiasana ny fitaovana. Miankina amin'ny asa tokony hataon'ny mikrofonina, ireo seza ireo dia ny birao na ny biriky.
Ny latabatra mijoro ho an'ny mikrôfo
Ny mikrôpô izay nanaovana ny birao dia natokana ho an'ny fifandraisana amin'ny Internet, mandritra ny lalao amin'ny aterineto, amin'ny fandraisana anjara amin'ny videoconferans. Amin'ny ankapobeny dia azo avaozina io toerana io, izay ahafahanao mamadika ny mikrô amin'ny maridrefy. Ny fototry ny fitaovana dia mavesatra kokoa mba hanomezana tosika tsara kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny USB misy usb dia atolotra ho an'ny varotra avy hatrany eo amin'ny sehatra.
Mijoro ho an'ny mikrôfo
Ny trano fanorenana dia novidina tamin'ny mpanakanto mozika matihanina. Ny fitaovana dia natao hamotsorana ny tanan'ny sangisangy mandritra ny fampisehoana. Marina izany raha mizara piano na guitar ilay mpihira, ankoatra ny fihirana. Misy mikrô, ohatra, ampiasaina amin'ny fantsona zavamaneno, ohatra, drums.
Ny tohatra ao amin'ny planeta dia manana haavo sy fihenam-bidy. Izy ireo dia vita tamin'ny tady matanjaka, noho izany maharitra sy azo itokisana.
Misy karazana fanohanana roa:
Ny fitaovana dia manana boribory boribory boribory na tongotra 3-4 any ambany, izay manome antoka ny fahamarinany. Ho an'ny mikrô, natao ho an'ny fitaovana mozika, ampiasao ny dikan-teny fohy kokoa amin'ny seza.
Raha mila mividy fitaovana toy izany ianao dia mety hipoitra ny fanontaniana: inona no anaran'ny tena mikrôfo? Ao amin'ny magazay manokana, misy ny anarana hoe "mikrôfo".
Mikrôfo ho an'ny solosaina
LED garlands ho an'ny hazo
Ahoana ny hampifandraisana ilay mpandray feo amin'ny fahitalavitra?
Rahoviana ny manadio ny tongolo lay?
Lolo vavy mody 2014
Lapatan'i Pavlovsk any Saint-Pétersbourg
Gaga be! Kate Middleton dia printsy talohan'ny fanambadiana
Ahoana no hitehirizana trondro maina?
Kitapo Pencil Kitchen
Toe-karena amin'ny alina
Vareniki miaraka amin'ny serizy amin'ny rano - recipe
Costa Dorada - toetoetran'ny mpizahatany
Kim Kardashian dia nanamafy ny vaovao momba ny zanany fahatelo